Sei KuFedora: Isa, Tsvaga uye Bvisa zvinoshandiswa graphically (GPK-Chikumbiro uye Apper) | Kubva kuLinux
Sei KuFedora: Isa, Tsvaga uye Bvisa zvinoshandiswa graphical (GPK-Kunyorera uye Apper)
naPerseus | | GNU / Linux, Yakurudzirwa, Networks / Maseva, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Pane dzakawanda nguva, vashandisi veGNU / Linux zvimwe "ruzivo"Isu tinoedza kugovana ruzivo rwedu nevatsva (kana nevamwe vanoda kuziva) kubva pane imwe nzira isiriyo, ndinorevei neizvi? Zvakanaka, vazhinji vedu tinoda kushandisa iyo terminal, console, tty kana chero chavanoda kuchidaidza, nekuti chishandiso chinoshanda, chinokurumidza uye chakasiyana, asi hatimire kufunga kuti, tisingazivi, tinovatyisa kana kugadzira mufananidzo wenhema kana kutenda kuti muGNU / Linux zvese zvakaomarara. Muenzaniso wekare ungave:
"Nei ndichifanira kudzidza kushandisa iyo terminal kuti ndiise iyo "solitaire" pakombuta yangu? Mune mamwe masisitimu anoshanda zvakaringana kudzvanya pa X faira uye wozvipa rinotevera, rinotevera ... ndinogona kuita zvese zvakajeka. Kana zvese zviri mu "Linux" zvakaita seizvi, zvirinani ndigare pandiri".
Aya marudzi emakomendi chingwa chedu chezuva nezuva mumablog akasiyana akanangana nepenguin. Chinangwa changu hachisi chekumira kuti ndiite nharo kuti ndiani uye ndiani asiriye kana ndiani ari kukanganisa uye asiri. Chinangwa cheichi posvo ndechechokwadi kuratidza kuti: muGNU / Linux iwe unogona zvakare kuita irwo rudzi rwezvinhu zvakakosha graphically usingashandisi iyo terminal. Zvichava kumushandisi kuona kuti ndeipi sarudzo yekutora uye ndeipi sarudzo iri nyore kana inoshanda kune yakapihwa mamiriro.
MuFedora isu tine maviri mapakeji mamaneja ayo anoshandisa graphical interface, aya ndeaya: gpk-kunyorera yeGnome, XFCE uye LXDE uye apper ye KDE. Nei paine mavhezheni maviri? Nechikonzero chiri nyore icho Gnome, XFCE uye LXDE vanoshandisa raibhurari GTK + uye KDE inoshandisa raibhurari QT (kana paine munhu anoda kuziva zvakawanda nezvazvo: GTK +, QT). Iko mashandiro evose vari vaviri mapakeji maneja akafanana chaizvo kunyangwe iwo maitiro angave akasiyana, nekuda kwekuita zvinangwa, mune izvi How To Tichaona maitiro ekuzviita ne gpk-application. Vashandisi veApper (KDE), pfungwa dzakatsanangurwa pano dzinoshanda kune maneja wako wekushandisa;).
Manage mapakeji kuburikidza gpk-application (Gnome, XFCE uye LXDE)
Sezvo gpk-application iri default package maneja enzvimbo idzi nhatu dze desktop (kwete kuverenga mamaneja ewindo ¬.¬), ndinoona zvisingaite kuisa iwo mapikicha enzira dzakawanda dzekuti ungaiwana sei kubva kuGnome, XFCE neLXDE pakati pevamwe:,, kuti zvive zvinoshanda isu tinoshandisa iyo yekutanga kuvhura;).
Zvakanaka, kuwana maneja wedu wekushandisa tinodzvanya: Alt + F2 uye tinonyora:
gare gare, tinodzvanya Enter uye chifananidzo senge chinotevera chinofanira kuoneka:
Ngatione kuti maneja wedu wekushandisa akagadzirwa sei:
Muchikamu chino chehwindo tinogona kutsvaga mapakeji edu kana kunyorera, ingo nyora tsananguro kana zita rayo.
Muchikamu chino chehwindo redu pachave nerondedzero yemapakeji akaenzana zita kana tsananguro yakapinda muKutsvaga zvinyorwa bhokisi.
Ichi chikamu chehwindo redu ndechimwe chinonyanya kufadza nekuti nacho tinokwanisa kusefa mapakeji edu nenzira nhatu dzakasiyana, ngatione zvaunogona kuita zvizere.
Pano isu tichawana muunganidzwa wemapakeji ayo ane hukama kune mumwe nemumwe zvichienderana nechikamu chavari, semuenzaniso: Mabhuku uye magwara, Dhizaini Suite, nezvimwe. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana isu tikaisa muunganidzwa, ese mapakeji ari mukati meiyo muunganidzwa anozoiswa.
Iyi sarudzo inotibvumira kuti tione mapakeji achangopfuura akawedzerwa kune edu software zvinyorwa.
Iyi sarudzo inotiratidza iwo mapakeji ese atakasarudza isati yaitwa yekumisikidza kana yekumisikidza kushanda, izvi zvinogona kubatsira zvikuru kuongorora usati waisa shanduko kusisitimu yedu.
Muchikamu chino chehwindo, tichawana mapakeji ese akarongwa nezvikamu, saka kana tikasarudza kutsvaga semuenzaniso webhurawuza, chinhu chete chataizofanira kuita kuwana chikamu cheInternet kutiratidza mapakeji ese ane hukama uye anowanikwa yechikamu ichocho.
Muchikamu chino chekupedzisira chehwindo tichaona tsananguro pfupi yepakeji yatakasarudza, ichitiratidza dhata senge: ndeyei, nderipi boka, nderudzi rezinesi (ingave GPL, BSD, yakavanzika, nezvimwewo), saizi yeiyo zvakafanana nenzvimbo yekuchengetedza ndeyayo. Isu tinoona kushanda kwezvese zvishandiso pamwe chete nemuenzaniso;).
Ngatitsvakei pasuru yeFirefox:
Ndinovimba kuti neakatsanangurwa pamusoro apa, unogona kutsanangura ruzivo rwese rwunoratidzwa pachiratidziro: P. Sezvo iwe uchaona iyo package yeFirefox inoratidzika yakamisikidzwa, izvi zvinorevei? Ok, kana pasuru yakamiswa zvinoreva kuti yatove kuiswa.
Isa uye uninstall mapakeji kana maapplication
Kuti isu tigone kuisa kana kusabvisa mapakeji kana kunyorera pane yedu system, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuita: kutsvaga kwepakeji, kungave nekutsvaga nezita-tsananguro kana nezvikamu, kana runyorwa rwaonekwa mune yedu package package tichaita zvinotevera:
Isu tinosarudza uye tinomaka application kuti tiise
Unogona kucherechedza mumufananidzo kuti + chiratidzo chinowonekwa nebhuruu, izvi zvinoratidza kuti pasuru iri mubvunzo yakatarwa kuiswa, nei yakarongwa? Zvakanaka izvi imhaka yekuti isu tinokwanisa kusarudza akawanda mapakeji mukutsvaga kwakawanda uye nekuisa mashandiro, kungoisa chete, tinogona kuisa zvinopfuura imwechete app panguva;).
Kana tangopedza kusarudza mafomu atinoda kuisa, tinya bhatani aplicar.
Kana mapakeji (s) kana mashandiro (atinozoisa) achida zvinotsamira pakuwedzera, tichaona mufananidzo senge inotevera panotizivisa nezve izvi:
Tinosunda Enderera Kuti uenderere mberi nekumisikidza, mune inotevera nhanho isu tichakumbirwa kuisa password yedu, kana izvi zvaitwa, maitiro ekumisikidza anozoitwa
Sarudza uye simbisa mashandisiro acho.
Sezvaunogona kuona, chiratidzo chinowanikwa muchimiro chemarara chinogona kuratidza chaizvo kuti pasuru iyi yakarongerwa kubviswa. Kuenderera mberi, tinodzvanya aplicar uye iyo yekubvisa maitiro ichatanga.
Tsamba, vamwe venyu vangave muchishamisika, bhatani racho nderei? Cheneswa kubva kumaneja windows? Basa rebhatani iri kubvisa chero shanduko yakarongwa mumaneja wekushandisa, ndiko kuti, kugadzirisa shanduko dzese dzatakamaka kana kuratidza dzisati dzaiswa, zvingave zvakaenzana nekuvhara faira pasina kuchengetedza shanduko;).
Zvakareruka zvakakwana, handiti? 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Sei KuFedora: Isa, Tsvaga uye Bvisa zvinoshandiswa graphical (GPK-Kunyorera uye Apper)
Ini kazhinji handishandise application kuisa mapikicha, zvinoita kunge zvinononoka uye zvisingaite zvakanyanya, dzimwe nguva hauzive zvauri kuita, hapana kufambira mberi kana chero chinhu.
Ini ndinoda nekoni kushandisa yum
Isu tatova 2, tisingataure kuti dzinoverengeka XD yum haikundiki, asi nguva nenguva iwe unofanirwa kufunga nezve nyowani nyowani;).
Kwazisai mukoma :).
Yep! Chaizvoizvo kutaura kwangu kwanga kusiri kuti ndiri pro ndichishandisa koni, asi kuti ivo vanofanirwa kunatsiridza iyo GUI 🙂
Chero zano rekuti nei paunenge uchiisa iyo Virtual Bhokisi inondipa kukanganisa kwekuti haigone kuwana linux kernel, kana kubva kuichi chishandiso chawakaratidza kuti ndinogona kuchiisa ndisinga bve pane oracle peji? Ndiko here kuti ini ndoda iyo VM uye nekuda kweichi chikonzero ndaifanira kudzokera ku ubuntu: p
Iko kukanganisa kwaunotsanangura kunogadziriswa seinotevera:
nhasi nhasi ndinozviedza nekuda kweruzivo
muna sabayon ndaive nedambudziko rakafanana, mhinduro iyoyo yaizondishandirawo here mudistro iyoyo kana ndeye fedora chete?
Zvingave zvakafanana kuna Sabayon;).
Diego Campos akadaro
Chakandinetsa nezve fedora 16 ndechekuti mushure mekuisa iyo 'glchess' ndakaigadzira kuti itambe ichipesana nekombuta uye panguva yekutamba hapana chidimbu chakatama ¬ fully netarisiro uye mu fedora 17 yakagadziriswa.
Yumex akange asipo, chokwadi ndechekuti zviri kufamba mushe.
Ini ndinobatana neyumex, ndinoishandisa kwenguva yakareba uye inondikodzera chaizvo, kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti kana shangu ikasvisvina zvakanyanya ndinopedzisira ndasvika pakoni ne yum
Pindura kuna Phanter
Ini handizive zvinoitika, asi ndinoipa "Nyorera", inobuda "Kumirira mumutsetse" - "Kudhawunirodha ruzivo kubva kudura" - "Kugadzirisa kutsamira", bhaa rekufambira mberi rinotanga uyezve rinobviswa uye hapana yakaiswa. Pane anoziva here zvinoitika? Ndiri kutevera nhanho dziri papeji ino: http://www.howtoforge.com/the-perfect-desktop-fedora-17-p3
Chii chaizvo package yauri kuyedza kuisa? Ini ndinofungidzira kuti inofanirwa kuve nekuti iwe une kukanganisa mune imwe repository, tarisa kana iwe wakatevera maitiro acho zvakanaka;).
Muchokwadi, ndiri kuedza kuzviisa zvese panguva imwe chete, hehe, handizive kana zviri nekuda kwezvavanotaura pamusoro, izvo zvinononoka, uye ndinofanira kuedza kuzviisa imwe neimwe, kana mumapoka madiki.
ipapo pane mapakeji senge banshee uye azureus izvo hazvindibvumidze kuti ndizviise, yazvo zvandakaedza, izvo hazvindibvumidze, hazvitaure chero chinhu, hazvingozviisa.
Hei… hauchazotumira nezve Fedora futi?
Perseus ndiye anoshandisa Fedora, uye kwemwedzi mishoma anga aine mamwe matambudziko anomutadzisa kuuya kuno kuzoburitsa.
Francisco Villavicencio akadaro
Ndiri kushandisa Fedora 19 muchiSpanish.
Ini ndakaisa pgAdmin3 ndichishandisa "yum install pgadmin3", asi ini ndawana chimiro mumutauro wandisingazive pano.
Pindura kuna Francisco Villavicencio
Ini ndakaisa pgAdmin3 ndichishandisa "yum install pgadmin3", asi chimiro chaive mumutauro wandisingazive kuti chinotaridzika sei (hafu yechiGerman, hafu yechiFrench, hafu Chiputukezi ...) saka ndaida kusunungura chirongwa ndichishandisa qpk- kunyorera. Mushure mekutanga iyo pgk ... application, inondiudza kuti ndiise zita racho. Ndataipa "pgadimin3". Iyo komputa yakabatwa nehope nekusingaperi uye haina kundipa chero mhedzisiro.
Ini ndaodhaunirodha ndokukanda iyo pgk ... ndakaedza "postgresql" iyo yandakaisawo, uye komputa yakarara isina kundipa chero mhinduro.
Ini handizive zvinoitika kune iyo pgk-application package.
Yakanaka kwazvo dzidziso 😉
Kufananidza: ndangariro kushandiswa munzvimbo huru dze desktop
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 17 Beefy Chishamiso